ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): March 2010
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:00 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:26 PM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 1:36 AM0comments Links to this post
Enough to own the world.
Ruler of this planet.
Knowledge beyond computer.
in the end you'll leave this world
with just one single dress.
in the end your kingdom will be
justa6' x 4' ditch.
in the end can you spell the words
written on your grave?
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:27 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:47 AM0comments Links to this post
လူတစ်ယောက်ဟာ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကြာအောင် အသက်ရှင်နေစေကာမူ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာကိုသိတဲ့ (နာမရူပပရိစ္ဆေဒ) ဉာဏ်လောက်မှမရဘဲ အသက်ရှင်နေရလျှင် အကျိုးမရှိဘူး၊ အကာပဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်းလန်းနဲ့အသက်ရှင်နေရတာမို့ ။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့သူအတွက် (၆၂)ပါးသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားတွေ ဖြစ်နိုင်ကြတယ်။
ယောဂီသူတော်စင်တွေအားလုံးဟာ အနည်းဆုံးတော့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင် အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုတယ်။။ ရုပ်တရား၊ နာမ်တရား၊ ခန္ဓာငါးပါးလောက်တော့ ကွဲပြားအောင် အားထုတ်ရပါမယ်။ ဒါမှ သက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိနှောင်ကြိုးနဲ့အတုပ်အနှောင်ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင် သံသရာတည်းဟူသော ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ မျောပြီးတော့ ဒုက္ခဖြစ်နိုင်စရာပဲ အကြောင်းရှိတော့တယ်။ ဒုက္ခဖြစ်ဖို့များတယ်။
calleda'Mind-mountain',
and hardest to climb.
It isamountain, beautiful
and no less deceitful.
Manyamountaineer
aims for the peak.
the rest can't reach.
Every inch isachallenge
for the weak and waverer.
But every inch isareward
for the strong and sturdier.
Like 'Everest', it has
pitfalls, storms and winds.
But here as perils of
greed, anger and illusion.
isaright step.
Pushing you up, up
up to the pinnacle.
isawrong step.
down to the debacle.
is your own making.
on the midway ridge
Posted by The Bliss Of Emancipation at 6:11 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:38 AM 1 comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:24 AM 1 comments Links to this post
A face though smiling
may not be showing happiness.
Between the lips' lining
a pain may be suppressed.
A face with tears
may not be of sadness.
It can even be an outpouring
of some joyousness.
for finding ifafeeling
is genuine or coated.
And the best of feelings
is the "u nfeel i n g".
and moved by nothing.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:49 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 6:32 AM0comments Links to this post
သစ္စာမမြင်ဘဲ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးမပါဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှ ချမ်းသာအစစ်ကို မရနိုင်ဘူး။ သစ္စာမြင်မှ၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်တရားပါမှသာ ချမ်းသာအစစ်ကို ရနိုင်မယ်၊ ရောက်နိုင်ပါမယ်။
ဣဿာမစ္ဆရိယ နဲ့ သောတာပန်
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေ သိထားရမှာက ဣဿာ (မနာလိုမှု) မစ္ဆရိယ (သ၀န်တိုမှု) တွေ မိမိသန္တာန်မှာ ရှိနေသေးသမျှ သောတာပန်အစစ် မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အစစ်မှာ အဲဒီ တရားနှစ်ပါးလည်း လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ မဖြစ်တော့ဘူး။
သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ ရှိရင် ဘုရား တရား သံဃာ ငါးပါးသီလ အဲဒီအရာဌာနတွေအပေါ်မှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သက်ဝင်ယုံကြည်သွားတယ်။ ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားက ပိုခိုင်သွားတယ်။ ဘာကြောင့်တုန်း ဆိုတော့ သစ္စာမြင်သွားလို့ ပေါ့။ အပါယ်လေးဘုံက လုံးဝလွတ်ကင်းသွားလို့ ပေါ့။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 6:24 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:57 AM0comments Links to this post
တစ်ခါတုန်းက မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေပါတယ်။ ညနေချမ်းရောက်တော့ ရှင်ရာဟုလာ သီတင်းသုံးရာ သရက်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပါတယ်။ ရှင်ရာဟုလာက မြတ်စွာဘုရားအတွက် နေရာခင်းခြင်း၊ ခြေဆေးပေးခြင်းများ ပြုပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ရှင်ရာဟုလာ ခင်းထားတဲ့ နေရာမှာ ထိုင်တော်မူပြီး တရားစကား သြ၀ါဒ ပေးတော်မူပါတယ်။
“ချစ်သားရာဟုလာ.... အလုပ်တစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် မလုပ်ခင် စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ မိမိလုပ်မယ့်အလုပ်ဟာ မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်နိုင်မလား၊ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နိုင်မလား၊ ထိခိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် မလုပ်ပါနဲ့ တော့။
ချစ်သားရာဟုလာ.... လုပ်ဆဲမှာလည်း စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်နိုင်မလား၊ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နိုင်မလား၊ ထိခိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် မလုပ်ပါနဲ့ တော့။
ချစ်သားရာဟုလာ....လုပ်ပြီးပြန်ရင်လည်း စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ မိမိသူတစ်ပါး ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် မလုပ်ပါနဲ့ တော့။
ချစ်သားရာဟုလာ....အပြောတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်လည်း မပြောခင် စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်နိုင်မလား၊ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နိုင်မလား။ ထိခိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် မပြောပါနဲ့ တော့။
ချစ်သားရာဟုလာ....ပြောဆဲမှာလည်း စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ မိမိ သူတစ်ပါး ထိခိုက်နိုင်မလား။ ပြောပြီးပြန်ရင်လည်း စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် မပြောပါနဲ့ တော့။
ချစ်သားရာဟုလာ....အတွေးတစ်ခု တွေးတော့မယ်ဆိုရင်လည်း စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ တွေးဆဲမှာလည်း စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ တွေးပြီးပြန်ရင်လည်း စဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ မိမိ သူတစ်ပါး ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် မတွေးပါနဲ့ တော့။”
မြတ်စွာဘုရားရှင်က ကံသုံးပါးကို စင်ကြယ်အောင် လုပ်ဖို့ ဟောပြလိုက်တော့ ရှင်ရာဟုလာလည်း ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
ဆရာတော် ရဝေနွယ် (အင်းမ) ၏ “မိမိကိုယ်ကို မိမိတည်ဆောက်မယ်” ဆောင်းပါးမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
အထက်ပါ တရားတော် အဆုံးအမလေးကို ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ ဘာသာရေးစာပေတွေ လေ့လာဖြစ်တုန်းက ဖတ်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က သားတော်ရှင်ရာဟုလာကို ဆုံးမလိုက်တဲ့ စကားတော်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း ဖခင်က ကျွန်တော့်ကို ဆုံးမလိုက်သလိုပါဘဲ။ ရင်ထဲအထိ စိမ့်ဝင်ခဲ့တဲ့ အဆုံးအမတော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် ရဝေနွယ် စာအုပ်ကို ဖတ်ရင်း ဒီအဆုံးအမလေးကို ရေးထားတာ ပြန်တွေ့ လိုက်တော့ အဝေးရောက်နေတဲ့သားတစ်ယောက်ကို ဖခင်က ထပ်ပြီးဆုံးမလိုက်သလို ပြန်ခံစားလာရလို့စာအုပ်ထဲကနေ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:23 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Notes, Yawainwe
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:17 AM0comments Links to this post